हिन्दु स्वयंसेवक संघद्वारा चेपाङ समुदायमा खाद्यान्न वितरण - NEPALALERT
Homeसमाजहिन्दु स्वयंसेवक संघद्वारा चेपाङ समुदायमा खाद्यान्न वितरण
भरतपुर । हिन्दु स्वयंसेवक संघ नेपाल र मारवाडी सेवा केन्द्रले संयुक्त रूपमा चितवनको विपन्न चेपाङ समुदायलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराएका छन् ।
चितवन राप्ती नगरपालिका -११ का जुमलिङ, किरनटार, जोङग्वाङ, रेपाक, ठकुरी भन्ज्याङ, बेलगाउँ, सिमलडाँडालगायतका आठ गाउँका २३० परिवारलाई खाद्य सामग्री वितरण गरिएको हो । वितरित खाद्य सामग्रीमा चामल, दाल, तेल, नुन, सोयाविन रहेको संघले जनाएको छ ।
बाँकेमा संघ र सेवा इन्टरनेशनल नेपालले नारी सीप विकास केन्द्र रामलाल मैदानमा रहेको कोभिड आइसोलेसन सेन्टरलाई चार थान सानो र तीन थान ठूलो गरी सात थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर हस्तान्तरण गरेको थियो ।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि संघ नेपालका पश्चिम सम्भाग प्रचारक विकुल दाहालले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डा. धवल शमशेर राणालाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर हस्तान्तरण गरेका थिए ।
सामग्री ग्रहणपछि प्रमुख राणाले आइसोलेसनमा उपचारमा रहेका बिरामीका लागि ती सामानको सदुपयोग गरिने जनाउँदै सहयोग अनुकरणीय रहेको बताएका थिए ।
उता, सेवा इन्टरनेशनल नेपाल र हिन्दु स्वयंसेवक संघ नेपालले भैरहवास्थित केशवधाममा १५ शय्याको कोभिड आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गरी अघिल्लो सातादेखि सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
Previous articleनिषेधाज्ञामा केही खुकुलो : के खुल्छ, के खुल्दैन ?
Next articleमुख्यमन्त्री राउतले गरे चार मन्त्रीलाई बर्खास्त
NEPAL ALERT - June 21, 2021
युवा नेता सिंहद्वारा बाढीपीडितका लागि राहत रकम घोषणा
NEPAL ALERT - June 18, 2021
NEPAL ALERT - June 17, 2021